Instagram मा प्रतिबन्ध: यो के हो, यो के को लागी हो र यो कसरी गरिन्छ | एन्ड्रोइडसिस
Instagram मा प्रतिबन्ध: यो के हो, यो के को लागी हो र यो कसरी गरिन्छ
ईडर फेरेनो | 23/06/2022 10:00 | मा अद्यावधिक गरियो 24/06/2022 15:58 | ट्यूटोरियलहरू
इन्स्टाग्राम एउटा सामाजिक सञ्जाल हो जसले हामीलाई अन्य खाताहरूसँग सञ्चार गर्ने तरिकालाई नियन्त्रण गर्न दिन्छ। एपमा धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन्, जसले तपाईंलाई कम वा कम सञ्चार वा अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्न अनुमति दिन्छ। एउटा कार्य भनेको इन्स्टाग्राममा प्रतिबन्ध लगाउनु हो, जसको बारेमा हामी अर्को कुरा गर्नेछौं, यद्यपि यो एक मात्र होइन।
प्रतिबन्ध प्रकार्यको अतिरिक्त, हामीसँग इन्स्टाग्राममा छ म्यूट र/वा अन्य खाताहरू ब्लक गर्ने क्षमताको साथ। यी सबै विकल्पहरू हुन् जसको साथ हामीले सामाजिक सञ्जाल भित्रका अन्य खाताहरूसँगको सञ्चार, सम्पर्क वा अन्तरक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौं। तिनीहरूमध्ये प्रत्येकमा के समावेश छ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनभने त्यहाँ केही हुन सक्छ जुन तपाईंले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ।
1 इन्स्टाग्राममा प्रतिबन्ध, म्यूट र ब्लक गर्नुहोस्: तिनीहरू के हुन्
2 इन्स्टाग्राममा कसैलाई कसरी प्रतिबन्ध लगाउने
3 प्रतिबन्ध हटाउन
4 कसैले मलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ?
इन्स्टाग्राममा प्रतिबन्ध, म्यूट र ब्लक गर्नुहोस्: तिनीहरू के हुन्
हामीले उल्लेख गरिसकेका छौं, यी तीन विकल्पहरू छन् जसको साथ सामाजिक सञ्जाल हामीलाई अरूसँग भएको सञ्चार वा अन्तरक्रिया व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिनेछ। इन्स्टाग्राममा त्यहाँ खाताहरू हुन सक्छन् जसको साथमा हामी कम सम्पर्क गर्न चाहन्छौं, उदाहरणका लागि, किनभने तिनीहरूले हामीलाई परेशान गर्छन् वा हामी तिनीहरूले अपलोड गरेको पोस्टहरू हेर्न सक्षम हुन चाहँदैनौं। यी तीन विकल्पहरू प्लेटफर्मका सबै प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्न सक्ने कुरा हुन्। तिनीहरूमध्ये प्रत्येकले हामीलाई फरक विकल्पहरू दिन्छ वा तिनीहरूको फरक प्रभाव हुनेछ। त्यसैले परिस्थिति अनुसार, एक फरक प्रयोग गरिनेछ।
मौन: म्यूट सुविधा भनेको हामीले प्रयोग गर्न सक्ने कुरा हो जब हामी हाम्रो समाचार फिडमा एक निश्चित खाताबाट पोस्टहरू हेर्न रोक्न चाहन्छौं। त्यहाँ एक खाता हुन सक्छ जसले धेरै फोटोहरू अपलोड गर्दछ, जसले हामीलाई थकाइ दिन्छ। तसर्थ, यदि हामीले खातालाई मौन बनायौं भने, यी प्रकाशनहरू (यो तिनीहरूका कथाहरूसँग पनि गर्न सकिन्छ), एपको समाचार खण्डमा देखा पर्न बन्द गर्नुहोस्। यदि हामी तिनीहरूको प्रकाशनहरू हेर्न चाहन्छौं भने हामीले तिनीहरूको प्रोफाइल प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। हामी यो खाता मार्फत लाइक, टिप्पणी छोड्ने वा सन्देश पठाउन जारी राख्न सक्षम हुनेछौं।
प्रतिबन्ध गर्ननोट: इन्स्टाग्राममा प्रतिबन्धित सुविधा भनेको खाताहरू बीचको सञ्चारलाई असर गर्ने कुरा हो। जब तपाइँ कसैलाई प्रतिबन्ध लगाउनुहुन्छ, उसले अझै पनि तपाइँको पोस्टहरू देख्न सक्छ, तर जब उनीहरूले एक टिप्पणी छोड्छन्, तपाइँले प्रत्येक टिप्पणीलाई अनुमोदन वा अस्वीकार गर्न आवश्यक छ। त्यसोभए तपाईंले उनीहरूको टिप्पणीहरू देखिनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि। साथै, जब यो व्यक्तिले तपाईंलाई सन्देश पठाउँछ, तिनीहरूको सन्देश पठाइन्छ मानौं यो अनुरोध हो। तपाईं एपमा च्याटमा जोडिएको बेला उसले पनि हेर्न सक्नेछैन, न त तपाईंले उसको कुनै सन्देश पढ्नुभएको छ कि छैन भनेर उसले देख्नेछ।
ब्लक: अवरुद्ध यी तीन मध्ये सबैभन्दा कट्टरपन्थी विकल्प हो। जब तपाईंले कसैलाई रोक लगाउनुहुन्छ, यो व्यक्तिसँगको सबै सम्पर्क हटाइन्छ। तपाईंको प्रोफाइल तिनीहरूका लागि गायब हुन्छ, तिनीहरूले तपाईंलाई खोज्न वा तपाईंले आफ्नो खातामा अपलोड गर्नुभएको पोस्टहरू हेर्न सक्षम हुने छैनन्। थप रूपमा, तिनीहरूले तपाईंलाई अनुप्रयोगमा सन्देशहरू पठाउन सक्षम हुने छैनन्। यसको मतलब तपाईंले तिनीहरूको प्रोफाइल, तिनीहरूको गतिविधि हेर्न वा तिनीहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुने छैन। यो त्यस्तो चीज हो जुन कसैले हामीलाई उत्पीडन गर्दा वा वास्तवमै आपत्तिजनक भएको बेला गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई हामीसँग सम्पर्क हुनबाट रोक्छ।
यी विकल्पहरू मध्ये प्रत्येक एक निश्चित समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। परिस्थितिमा निर्भर गर्दै, त्यहाँ एक हुन सक्छ जुन तपाइँको लागि अधिक उपयुक्त छ। त्यसोभए अब तपाईलाई थाहा छ कि तिनीहरू मध्ये प्रत्येकले के गर्छ, तपाईले सबैभन्दा उपयुक्त ठान्ने एउटा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
इन्स्टाग्राममा कसैलाई कसरी प्रतिबन्ध लगाउने
यदि तपाईंले इन्स्टाग्राममा कसैलाई प्रतिबन्धित गर्ने विकल्प रोज्नुभएको छ भने, तपाईं यस व्यक्तिसँग भएको सञ्चारलाई सीमित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईं अझै पनि फिडमा सामान्य रूपमा तिनीहरूका पोष्टहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ, र तपाईंको फिडमा देखा पर्नेछ। तिनीहरूले तपाईंका केही तस्बिरहरू मन पराउन सक्षम हुनेछन्, तर तिनीहरूका टिप्पणीहरू तपाईंले चाहनुहुन्छ भने अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा हुनेछ। साथै, सन्देशहरू इनबक्समा सामान्य रूपमा प्रदर्शित हुने छैनन्। त्यसोभए यो एक उपाय हो जुन तपाईले यस व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने तरिकामा धेरै प्रभाव पार्छ, तर त्यस्तो संचारलाई सीमित गर्नु तपाईले चाहानु भएको कुरा हुन सक्छ।
यो त्यस्तै हो तपाईं सामाजिक सञ्जाल मा कुनै पनि खाता संग गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाल तपाईलाई पछ्याउने व्यक्ति हुन सक्छ, तर तपाईलाई फलो नगर्ने र सार्वजनिक खाता भएको व्यक्तिसँग पनि तपाईले यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यदि तपाइँ इन्स्टाग्राममा कसैलाई प्रतिबन्धित गर्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ पछ्याउने चरणहरू छन्:
इन्स्टाग्राम एप खोल्नुहोस्।
यो व्यक्तिको खाता खोज्नुहोस्। या त तपाईंको अनुयायीहरूको सूचीमा वा अनुप्रयोगको खोज पट्टी प्रयोग गरेर। त्यसपछि यो व्यक्तिको प्रोफाइल प्रविष्ट गर्नुहोस्।
शीर्ष दायाँमा तीन ठाडो थोप्लाहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
स्क्रिनमा विभिन्न विकल्पहरू भएको मेनु खुल्छ। प्रतिबन्ध विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
इन्स्टाग्रामले यो गरेको पुष्टि गरेको छ।
यदि त्यहाँ धेरै खाताहरू छन् जुन तपाईं सामाजिक नेटवर्कमा प्रतिबन्धित गर्न चाहनुहुन्छ भने, ती प्रत्येकसँग प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
तपाईंले यी प्रतिबन्धहरू लागू गर्नुभएको व्यक्तिलाई यस विषयमा केही थाहा हुँदैन। इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई कसैले तपाईंलाई प्रतिबन्धित गरेको छ भनी सूचना जारी गर्दैन, त्यसैले यस सम्बन्धमा तपाईंले चिन्ता लिनुपर्ने केही छैन। हो, यो केहि चीज हो जुन तपाईले केहि केसहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, यदि तपाईले देख्नुहुन्छ कि तपाईको टिप्पणीहरू मध्ये एक प्रत्यक्ष रूपमा प्रकाशित गरिएको छैन वा प्रत्यक्ष रूपमा प्रकाशित गरिएको छैन। त्यसोभए कसैले तपाईंलाई अवसरमा सोध्न सक्छ यदि त्यहाँ समस्या छ वा तपाईंले उनीहरूको टिप्पणीहरू मेटाउनुभएको छ भने। तर तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धित गर्नुभएको छ भनी कसैलाई थाहा पाउने कुनै सीधा तरिका छैन।
हामीले इन्स्टाग्राममा केही खाताहरू प्रतिबन्धित गरेका छौं र केही समय पछि हामीले हाम्रो दिमाग परिवर्तन गरेका छौं। यस अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौं? त्यसै गरी हामीले इन्स्टाग्राममा प्रतिबन्ध प्रकार्य प्रयोग गरेका छौं हामीलाई त्यस्ता प्रतिबन्धहरू रद्द गर्ने क्षमता दिइएको छ। सामाजिक सञ्जालले हामीलाई खातामा लागू गरेका प्रतिबन्धहरू हटाउन अनुमति दिन्छ। यसरी, यस खातासँगको सञ्चार सामान्यमा फर्किनेछ, जुन हामीले यस मामलामा खोजिरहेका छौं। यस अवस्थामा हामीले पालना गर्नुपर्ने चरणहरू निम्न हुन्:
आफ्नो उपकरणमा Instagram खोल्नुहोस्।
तपाईंले यी प्रतिबन्धहरू लागू गर्नुभएको व्यक्तिको प्रोफाइल फेला पार्नुहोस् र तिनीहरूको प्रोफाइल प्रविष्ट गर्नुहोस्।
दायाँ कुनामा तीन ठाडो थोप्लाहरूमा क्लिक गर्नुहोस्।
देखा पर्ने मेनुमा, रद्द प्रतिबन्ध भनिने विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
इन्स्टाग्रामले पुष्टि गर्यो कि तपाईंले यो गर्नुभयो।
हामीले छलफल गरिसकेका छौं, जब हामी खाताबाट प्रतिबन्धहरू हटाउँछौं दुई बीचको संचार फेरि परिवर्तन हुनेछ। यो संचार अब प्रारम्भिक वा मौलिक अवस्थामा फर्कन्छ। त्यसोभए यो व्यक्तिले अब हाम्रा पोस्टहरूमा आफूले चाहेको सबै टिप्पणीहरू छोड्न सक्षम हुनेछ र ती टिप्पणीहरू सीधै प्रकाशित हुनेछन्। हामीसँग अब यी टिप्पणीहरू अनुमोदन गर्ने क्षमता हुनेछैन। यदि हामीलाई तिनीहरू मध्ये कुनै पनि मनपर्दैन भने, हामी तिनीहरूलाई सधैं मेटाउन सक्छौं, यसले परिवर्तन गर्दैन, तर टिप्पणी सीधै प्रकाशित गरिनेछ भन्नुभयो।
प्रत्यक्ष सन्देशहरू पनि फेरि परिवर्तन हुनेछन्। यो व्यक्तिले हामीलाई सामान्य रूपमा सन्देश पठाउन सक्षम हुनेछ, र भनिएको सन्देश Instagram मा इनबक्समा फेरि देखा पर्नेछ। यसलाई पहिले जस्तै अनुरोधको रूपमा पठाइने छैन। साथै, जब हामी एपमा च्याट प्रविष्ट गर्छौं, यो अन्य व्यक्तिले हामी अनलाइन छौं वा छैनौं भनेर हेर्न सक्षम हुनेछन्, निश्चित रूपमा तिनीहरूले सन्देश पठाउनको लागि फाइदा लिन सक्ने कुरा। पढ्ने रसिदहरू पनि फेरि उपलब्ध हुनेछन्, त्यसैले तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ जब हामीले तपाईंको सन्देशहरू पढेका छौं र यदि हामीले तपाईंलाई बेवास्ता गर्दैछौं, उदाहरणका लागि।
कसैले मलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ?
निस्सन्देह, हामीले सामाजिक सञ्जालमा अर्को खातालाई मात्र सीमित गर्न सक्दैनौं। निर्णय गर्ने कोही हुन सक्छ हामीसँग यो प्रतिबन्ध सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्, किनभने हामी कष्टप्रद छौं। हामीले पहिले नै भनेझैं, सामाजिक सञ्जालले यी प्रतिबन्धहरू लागू गरिएको व्यक्तिको लागि सूचना जारी गर्दैन। त्यसोभए यो हामीले पहिले नै थाहा पाउन सक्ने कुरा होइन, सुरुमा तपाईंले धेरै परिवर्तनहरू याद गर्नुहुने छैन।
जस्तो कि हामीले उल्लेख गर्यौं, यो केहि कुरा हो जुन हामी संचार मा केहि अवस्थामा देख्न सक्छौं। यदि हामीले यस व्यक्तिको प्रकाशनमा टिप्पणी छोड्छौं र टिप्पणी सीधै बाहिर आउँदैन भने, यो शंका उठाउन सक्ने कुरा हो। यसले हामीलाई बताउन सक्छ कि यो व्यक्तिले हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यदि यो धेरै सन्देशहरूसँग हुन्छ भने, यो पहिले नै स्पष्ट देखिन्छ कि यो मामला हो। साथै यदि हामीले पोस्ट गरेका धेरै कमेन्टहरू कहिल्यै नदेखिएको देखेमा, त्यस्ता प्रतिबन्धहरू लागू गरिएको हो कि भन्ने शंका पनि गर्न सक्छौं।
अर्कोतर्फ, यो सन्देशहरूमा ध्यान दिन सकिने कुरा हो। यदि यो व्यक्ति तपाईकहाँ कहिल्यै अनलाइन आउँदैन, तर त्यहाँ अर्को व्यक्ति छ जसले देख्न सक्छ कि तिनीहरू अनलाइन छन्, यो स्पष्ट रूपमा सामान्य होइन, त्यसैले उनीहरूले तपाईंलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। जब तपाइँ उसलाई सन्देश पठाउनुहुन्छ, यदि उसले तपाइँलाई जवाफ दिन्छ, तर तपाइँ देख्नुहुन्छ कि त्यहाँ कहिल्यै पढ्ने रसिद छैन, केहि चीज जुन Instagram मा च्याटहरूमा अवस्थित छ, अर्को विवरण हो जुन हामीलाई बताउनेछ। तपाईंले जहिले पनि यो व्यक्तिलाई सोधेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले तपाईंलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्, तर सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यो गर्दैनन्, त्यसैले माथि उल्लिखित संकेतहरूले तपाईंलाई जान्न मद्दत गर्न सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » ट्यूटोरियलहरू » Instagram मा प्रतिबन्ध: यो के हो, यो के को लागी हो र यो कसरी गरिन्छ
AMOLED वा IPS स्क्रिन: कुन राम्रो छ
Plex TV: यो के हो र यो नि: शुल्क स्ट्रिमिङ सेवा कसरी काम गर्दछ